Inona ny chloride polyvinyl ary inona no ampiasaina azy io?
Polyvinyl Chloride (PVC) dia polymer thermoplastic synthesized ary plastika sentetika novokarina be indrindra. Ity fitaovana ity dia natomboka voalohany tamin'ny tsena tamin'ny 1872, ary manana tantaram-pahombiazana efa hatramin'ny ela tamin'ny fampiharana maro. Ny PVC dia miseho amin'ny sehatra maro, anisan'izany ny indostrian'ny kiraro, c ...
Inona no vita amin'ny Gumboots?
Raha tonga amin'ity pejy ity ianao, dia mety ho fantatrao ny momba ny gumboots sy ny filana kiraro tsy misy rano ary avo lenta. Saingy, nijanona nieritreritra ve ianao, inona no vita amin'ny baoty orana? Eny, ny ankamaroan'ny kiraro tsy mahazaka rano dia vita avy amin'ny fingotra voajanahary na polyvinyl chlor ...
Tombony 4 lehibe amin'ny fampiasana PVC amin'ny tontolon'ny fanamboarana kiraro
Ny tontolon'ny famolavolana kiraro sy ny famokarana kiraro dia nivelatra be nandritra ny taonjato roa farany. Lasa ny andro fananana mpanao volo tokana manompo tanàna iray manontolo. Ny fananganana indostrialy ny indostria dia nitondra fiovana maro, manomboka amin'ny fomba fanaovana kiraro ka hatramin'ny sel ...
Fitaovana mety tsara amin'ny indostrialy FOOTWEAR
Ny indostrian'ny kiraro dia mitaky fitaovana misy fanoherana mekanika avo lenta, fahombiazan'ny fikarakarana, fanavaozana ary fisehoana ambony. Ny fitambarana PVC dia namboarina mba hamaly ireo fitakiana ireo. Ny famolavolana ireo fitambarana PVC dia mifanitsy t ...
Ny fotoana voalohany nahitana ny PVC dia tsy nahy tamin'ny 1872 nataon'ny mpahay simia alemana, Eugen Baumann. Namboarina ho toy ny tavoara voridahy klôroida avela ho tratry ny tara-masoandro izay namolavolana azy. Tamin'ny faramparan'ny taona 1800 dia nisy vondrona ...